GREENHOUSE FOR QAJAARKA LEH GACMAHOODA U GAAR AH: SAWIR, SIDA LOO SAMEEYO GABAYGA GABAYGA AH? - DHISMAYAASHA
Koraaya khudradda noocan oo kale ah sida qajaar xagaaga xagaaga ayaa u baahan in la abuuro xaalado aan fiicnayn.
Wax-soosaarka ugu weyn waxaa laga heli karaa iyadoo la isticmaalayo koriyo si loogu xafido qajaarka.
Guryaha aqalka dhirta lagu kariyo waa inay bixiyaan shaqada ee bixinta kuleylka qudaarta koritaanka iyo horumarka. Sidaa darteed, naqshadeynta waa inay ahaataa mid dhererkeedu yar yahay, maaddaama xaaladdahan ay fududahay in kuleylka loo kululeeyo.
Isla mar ahaantaa, waa inuu ku saabsan yahaysiin hawo cusub geedkasidaas darteed waa inay noqotaa mid hawo badan oo suurtagal ah inta lagu jiro saacadaha maalintii. Waxaa macquul ah in la doorto naqshadahan oo noqon doona mid furan intii suurta gal ah inta lagu jiro maalinta.
Sidaa awgeed, xaruntu waa inay siisaa kuleylka ugu badan ee dhirta habeenkii, oo furan oo hawo qaboojiya inta lagu jiro maalinta marka hawada hawadu u oggolaato. Haddii heerkulka maalintii uu ka yar yahay kan looga baahan yahay agrotechnology ee beerashada, waxaa ku jira godadka dabaysha waa in la siiyaa.
Jawaabta su'aasha: sida loo sameeyo (dhisto) aqalka dhirta lagu koriyo qajaarka leh gacmahaaga? ma aha mid fudud. Waxaa jira fursado badan oo kala duwan. Guryaha loogu talagalay qajaarka ee qaababka naqshadda ma aha mid aad u adag. Qalbi kasta oo ka mid ah waa qaabkaku rakibay sanduuqa ama toos loogu rakibay dhulka. Xaaladda ugu weyn ee dusha sare ee ugu sarreeya waa daahfurnaanta ugu badan, tan tan khudradda aadka u baahnaysa si ay u helaan iftiinka qorraxda.
DAREEN! Waxaa jira tiro ballaaran oo naqshadaha diyaar ah oo ay samaysay habka warshadaha.
Laakiin waqti isku mid ah, waxaa suurtagal ah in la dhiso aqalka dhirta lagu koriyo oo qajaarka laga soo bilaabo alaabta qashinka ah. Kuwa ugu caansan iyo waqti isku mid ah si sahlan loo samaynta waa qaababka soo socda:
Qolka aqalka lagu koriyo
Xuddunta waxaa laga sameeyaa qoryaha tooska ah ee ciidda ama saldhigga sanduuq alwaax ah. Qulqulka aqalka dhirta Waxay noqon kartaa bir ah ama caag ah.
Faa'iidada ka sameysan geedaha qajaarka ee qajaarka waa dhaqdhaqaaqooda. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dayactirka dalagga beeraha, tan iyo dhismaha dhismayaasha istaraatiijiga ah waxay u baahan yihiin beddelaad sanadle ah oo ciidda gudaha ah, taasina waa tan ugu badan ee korontada soo-saarka aqalka dhirta qajaarka.
Xaqiiqdii, aqalka dhirta lagu koriyo waa tunnel of shaxan ku daboolay filim ama wax daboolaya. Qalabka loogu talagalay wax soo saarista waa inay noqdaan kuwo xoog leh isla markaasna awood u leh inay qaataan qaabka la doonayo. Marka la eego arrimahaan soo socda, waxay ku habboon yihiin dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo ee qajaarka:
- Metallic. Si toos ah loogu rakibay ciidda. Waxay yihiin kuwo xoog badan oo adag.
- Bacaha Waxay ka samaysan yihiin dhuumo caag ah, oo ku xiran ciidda iyadoo la adeegsanayo qajaar.
Dougie oo xoog leh Dhismayaasha ayaa lagu dhejiyaa xayawaanka jiifka ah ama silig. Iyadoo dherer dhererkiisu yahay tunnel hoosta koowaad iyo ugu dambeysa, rakibaadda taageerada toosan ayaa lagula talinayaa. Boorsada loo isticmaalo waa filim fiyuuseed ama wax aan la taaban karin.
MUHIIM! Bilowga xilli-ciyaareedka waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo filim si degdeg ah u kululaynta carrada hoosteeda. Marka qajaarku koraayo, marka heerkulka hawadu uu noqdo mid deggan, filimka ayaa lagu beddelay wax aan la taaban karin.
Halkan waxaad ku aragtaa sawir ah aqalka dhirta lagu koriyo oo qajaarku ku saleysan yahay naqshad alwaax ah oo gacmahaaga ah:
Waxaa la sameeyey laga bilaabo kabadaha ama baararka qaabka sanduuqyada. Saqafka ah ee aqalka dhirta lagu koriyo waxaa laga dhigi karaa flat, hal-jiit ama labanlaab. Dabool qabasho laga bilaabo daaqadaha hore ee daaqadaha, ama xayndaabyada dabaqyada leh daboolka.
Fiidiyowgaan, waxaad arki kartaa nooca kale ee fudud ee aqalka dhirta lagu koriyo ah ee qajaarka laga sameeyay jilicsan iyo filim:
Iskudhicelka moodooyinka kor ku xusan. adkeysiga iyo mudnaanta. Haddii filimka iyo dharka aan la taabanin u baahnayn beddelaad caadada ah, dusha sare ee polycarbonate ayaa loo isticmaalaa sanado. Intaa waxaa dheer, dusha this waa baraf u adkaysta, sidaas darteed aqalka dhirta lagu koriyo uma baahnid inaad kala tagto sanadka jiilaalka.
Polycarbonate waxay bixisaa helitaanka ugu yar ee iftiinka dhirta isla markaana waqti isku mid ah uma oggolaan karto in qorraxda tooska ah ee qorraxda si ay u gubaan caleemo. Iskuulada noocan oo kale ah waa kuwa ugu kulul, maadaama maaddadu leedahay meelo hawo leh oo gacan ka geysanaya ilaalinta kulaylka gudaha.
Si ka duwan sida ugu fudud ee arcadaha iyo koriyo dhirta qoryaha, Naqshadaha qaarkood waxay u baahan yihiin xirfado wax soo saar..
Guryaha aqalka qajaarka leh gacmahooda ka samaysan polycarbonate waxaa lagu sameeyaa iyadoo ku saleysan qaabka ay ku qoran yihiin xaashida kuxusan. Waa lagama maarmaan in la doorto qalab si gaar ah si taxaddar leh. Haddii qaabku ka samaysan yahay bir bir ah, waxaad la kulmi doontaa dhibaatada haragga. Aasaaska noocan oo kale ah wuxuu ubaahan yahay farsamooyin goos goos ah, natiijadiina si dhakhso ah u dhacdo. Waxaa haboon in la doorto profile galvanized for soo saarista ee jir ah, inkasta oo tani wax yar ka kordhin doona qiimaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Raqiis ahaan raqiis waa qaab ka samaysan alwaax. Laakiin muddada isticmaalka waa wax ka badan shan sano, ka dibna geedka ayaa si fudud u qudhmi. Laakiin haddii aad isticmaasho qalabka ilaalinta gaarka ah, nolol-maalmeedka si weyn ayaa loo kordhin karaa.
Bilow inaad ku dhisto aqalka dhirta lagu koriyo laga bilaabo polycarbonate laga bilaabo saldhigga ama saldhiga dabka. Xaaladda kowaad, aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu noqon doonaa mid taariikhi ah, labaadna waxaad u guuri kartaa meel kasta oo ka tirsan goobtaada.
Saldhigga waxaa laga sameeyaa qaab qaab ah si waafaqsan dimuqraadiyada la rabo. Xakamaynta biyaha waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo qalabka daadinta. Qoryaha waxaa lagu dhejiyaa saldhigga oo lagu dhejiyaa baqshiinka is-xoqida.
Saqafka aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu sameeyaa gaas, oo ku saleysan 20X40 baararka. Marka dhererka laga sameeyo xagasha 300, jiiradu waa nus mitir dheer, iyo wadarta guud ee koriyo ayaa noqon doonta 1.25 mitir.
Dhinacyada dhinacyada qaababka soo if-baxaya waxay ku xiran yihiin polycarbonate cell. Dhammaadkii saqafka waxaa lagu daboolay filim caag ah, marka loo eego xumbada hawada ama xoojinta. Qaabdhismeedka oo dhan waa naqshad go'an.
MUHIIM! Si looga fogaado dilaaca polycarbonate inta lagu jiro rakibidda, waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhejiyo saabuunta aluminium ee hoosta.
Haddii kale, saqafka aqalka dhirta lagu koriyo waa la qaadi karaa. Sidoo kale waxaad ku dabooli kartaa dusha sare leh warqadaha polycarbonate, iyada oo la raacinayo qalab casri ah oo furan.
Waxaad arki kartaa koriinno kale oo aad ka heli kartid halkan: Ka soo jeeda dhalooyinka caaga ah, laga bilaabo PVC, Laga soo bilaabo arcs, Laga bilaabo muraayadaha, Meelaha daaqadaha, Laga soo bilaabo tubooyinka qiiqa, Filimka hoose, Si aad uhesho, , Gogol qurxoon, Goosashada wanaagsan, Barafka, Cabbitaanka, Dayas
Dhowaan, at suuqyada dacha waxaa sii kordhaya suurtagal ah in la kulmo lagu koriyo gabayada for qajaarka la sameeyey gacmahooda. Ma aha oo kaliya guriga diiran ee dhirta, laakiin sidoo kale u adeega sida nooca qurxinta beeraha. Intaa waxaa dheer, saynisyahannadu waxay si isdaba joog ah uga hadlaan saameynta is-waafaqsanaanta bani-aadamka ee dhismayaasha sida.
Buulka lagu koriyo wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan:
- Dhismaha ayaa loo baahan yahay wax ugu yar.
- Xitaa qof aan khibrad lahayn ayaa dhisi kara.
- Geedaha naqshadahan iftiinka ugu badan.
- Xagasha derbiyada wuxuu ka hortagayaa kulaylka khudaarta gudaheeda sababtoo ah cirifka qorraxda qoraxda.
- In lagu koriyo sida fududahay in lagu hayo heerka loo baahan yahay qoyaanka iyo siinta hawo qaadashada sababtoo ah dhaqdhaqaaqa khaaska ah ee gudaha gudaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Qajaarka aqalka dhirta lagu koriyo-ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu koro, maaddaama ay koraan kalluunka dhulka, uma baahna derbiyada sare.
Saldhigga aqalka dhirta lagu dhejiyo waxaa ku yaal saldhigga 2 mitir, dhinac kastana wuxuu u dhigmaa 142 cm, tuubbo dhejis ah oo dhererkiisu yahay 320 cm ayaa lagu riixaa bartamaha dhismaha, tuubbo dhererkiisu ka kooban yahay 20 cm waxaa lagu wadaa qoto dheer oo ah 40-50 cm.
Kadibna waxaan ku dhiseynaa salka qaab muuqaal ah, oo leh dhinac saddex geesood ah.
Qaybaha 50 cm ee dhererka ah ayaa lagu dhajiyaa wareega wareegga, saldhigana waa la toogtay. Albaabka lagu koriyo waxaa laga dhisayaa koonfurta.
Waxaan ku dhejineynaa 4 koronto si ay saldhig u dhisaan, tani waxay noqon doontaa sheyga haramka. Waxaan isku xireynaa baararkaan ugu sareeya.
Si loo helo filim ama polycarbonate oo ku yaal baararka, baararka dheeraadka ah ayaa ku lifaaqan.
Kadibna waxaanu ku dhejinaa qaabdhismeedka oo dhan leh polycarbonate, filim ama qalab qaro leh.
MUHIIM! Waxaa wanaagsan in la isticmaalo filim xooggan, sida qofka caadiga ah uu si dhakhso ah u dhaco oo uu u baahan doono in la beddelo.
Xagga sare haramka, fogaan ah 15 cm sare ee sare, waa ka bax dooxada. Dabool waxaa loo sameeyaa, taas oo lagu dul saaro aqalka dhirta lagu koriyo ee guga iyo laga saaro xagaaga. Sidaa darteed dhirta waxaa la siin doonaa helitaanka ugu fiican ee hawada.
Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay dhismaha lagu koriyo oo loogu talagalay qajaarka dacha. Qof kastaa wuu dooran karaa naqshad la aqbali karo Xaaladda ugu weyn waa in la abuuro shuruudaha wanaagsan ee helitaanka dalag badan oo qajaarka ah.